Madaxweynaha Somaliland Oo Khudbad Sanadeedka Dastuuriga Ah Ka Hor Jeediyey Labada Gole Baarlamaan | HAATUF ONLINE
Home » Somali News » Madaxweynaha Somaliland Oo Khudbad Sanadeedka Dastuuriga Ah Ka Hor Jeediyey Labada Gole Baarlamaan
Madaxweynaha Somaliland Oo Khudbad Sanadeedka Dastuuriga Ah Ka Hor Jeediyey Labada Gole Baarlamaan
Hargeysa, March 8, 2021 (Haatufonline) – “Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxa sharaf iyo xurmo ii ah inaan maanta hor imaado Golaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland, oo aan ka jeediyo Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ah ee 2021.
§ Miisaaniyadda Qaranka ee sannadkii tagay waxa laga maal-geliyey 106 Mashruuc, oo qiimahoodu gaadhayo 173 Bilyan oo SL.Shillin ah, oo dhammaantood maray Qandaraasyada Qaranka iyo Tartan furan.
§ Miisaaniyadda Sannadka 2021-ka waxa la oddorosayaa in laga maal-geliyo Mashaariic Qiimahoodu gaadhayo 273 Bilyan oo SL.Shillin ah.
§ Deeqaha Dibedda aynu ka helno waxa ay dalka ka fuliyeen sannadkii tagay mashaariic horumarineed oo qiimahoodu dhan yahay 164.6 Bilyan oo SL.Shillin ah.Waan uga mahad-celinaynaa Saaxiibada Somaliland taageeradaa, waxaanse u sheegayaa in Marxaladda ay Somaliland ku jirto ay u baahan tahay taageero intaa ka badan.
§ Waxa lagu kordhiyey Shaqaalaha Dawladda 10% sannadkii tagay, taas oo ka dhigaysa in saddexdii sanno ee la soo dhaafay la kordhiyey tirada Shaqaalaha Dawladda5,150 qof, una dhiganta in guud ahaan Shaqaalaha Dawladda la kordhiyey26%.
§ Walow Xukuumaddu tirada intaa leeg oo shaqaale ah ay qaadatay, haddana dadka shaqo la’aantu hayso waxa ay ka noqonaysaa tiro aad u yar.
§ Marka la eego Dakhliga Guud ee dalka (GDP), Xukuumaddu waxa ay ka maamushaa in ka yar 10%. Waxaana ka muuqata Miisaaniyadda Xukuumadda in aanay culayska shaqo la’aanta iyo yaraynta faqriga aanay kaligeed dabooli karin. Sidaa darteed, waa hubaal in Shaqo-abuurka iyo horumarka dalka xil weyni ka saaran yahay suuqa xorta ah ee dastuurkeenu jideeyey.
§ Qiimaha Shillinka Somaliland waxa lagu ilaaliyay 8,500 halkii Doollar ba, Sicir-bararkuna 3.5 % ayuu hoos ugu dhacay sannadkii tagay. waana heerkii ugu hooseeyay ee muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan uu gaadho.
§ Somaliland waxa ka jira afar Baank oo gaar loo leeyahay. Lacagta ay Shacabka Somaliland dhigteen waa200 Milyan oo Doollar oo dhigaal ah. Sannadkii la soo dhaafay, afartaa Baank waxa ay dayn ku bixiyeen70 Milyan oo Doollar. Taas oo macnaheedu yahay in ay Qasnadaha ku hayeen lacag dhan 130 Milyan oo Doollar oo aan samayn wax dhaq-dhaqaaq maaliyadeed ah. Waxaay noqonaysaa in lacagtaasi fadhidaa ka qayb qaadanin wareega maaliyadeed ee dalka. Haddii Lacagtaasi ay wareeg maaliyadeed geli lahayd, waxa ay abuuri lahayd Wershado, Waxay dhisi kari lahayd Cisbitaallo casri ah, waxaanay u abuuri lahayd dadkeena shaqooyin badan.
§ Haddaba, maadaama ay wali yihiin Baananka kaliya ee dalka ka hawl-gala, walina ayna iman Baanan Caalami ah, Baanankeena, walow ay duruufo gaar ah qabaan, waxaannu ku boorinaynaa in ay hiigsadaan sida ay u shaqeeyaan Baananka Caalamku, kuwaas oo wareeg maaliyadeed galiya inta badan ee dhigaalka lacageed ee macaamiishooda.
§ Waxa la aas-aasay Mac’hadka Cilmi-baadhista Beeraha, kaas oo ujeeddadiisa ugu weyni tahay in uu horseed ka noqdo casriyeynta iyo horumarinta nidaamka wax-beerista iyo waraabka ee dalkeena, si loo hiigsan karo isku-filnaansho dhinaca wax-soo-saarka beeraha ah.
§ Waxa aynu hore u ogayn in ay dalkeena ka dabar-go’day shinnidii asalka ahayd. Sidaa awgeed, waxa dib loo soo celiyey 23 nooc oo ah Shinnidii asalka ahayd ee Dalagyadii Waddaniga ahaa ee dalkan caanka ku ahaa, waxaanu qorshuhu yahay in la abuuro Kaydkii Shinnida Qaranka (National Seed Bank).
§ Waxa la tallaalay Xoolo tiradoodu gaadhayso 3,000,000 oo neef, waxaana ka faa’iidaystay in kabadan 81,000 qoys oo xoolo dhaqato ah.
§ Waxa la bilaabay Dhismaha Dekedda Kalluumaysiga ee Maydh oo ay ku baxayso lacag gaadhaysa 5 Milyan oo Doollar.
§ Waxa 100% dhammaaday Wajigii Koowaad ee dhismaha Dekedda Berbera oo dhan 400 Mitir, waxaanay Dekeddeenu awood u yeelan doontaa in ay rogto 450 Kun oo Kontayner sannadkii, halka ay hadda ka rogi karto 150 Kun oo Kontayner sannadkii. Taas oo ka dhigan in 67% la kordhiyey awoodda Dekedda Berbera. Waxaynu beegsanaynaa in casriyeyntaasi u horseedo Dekedda Berbera in ay u adeegto dhammaan Dalalka Gobolka.
§ Waxa laga dhigayaa Madaarka Berbera, Madaar Caalami ah, oo u adeega dhammaan badeecadaha iyo Shucuubta Gobolka, waxaanu hawl-galayaa sannadkan, Insha Alla.
§ Dhismihii Waddada Berbera Corridor, walow uu wakhtigiisii ka habsaamay, duruufo jiray awgeed, haddase waxa uu u socdaa si xawli ah.
§ Waxa aan ugu bushaaraynayaa Shacabka Somaliland in WaddadiiBurco – Ceerigaabo dhawaan la dhammaystiri doono, oo ay hadhsan tahay 32 KM oo kaliya. Waxaana hadda dhammaaday 242 KM.
§ Waxa la bilaabay dhismahaWaddada Oodweyne-Burco oo ka kooban 53 KM, waxaanay ku dhammaan doontaa muddo kooban, Insha Alla.
§ Waxa la bilaabay sahaminta (Survey) Waddada isku xidha Lawyacaddo – Boorama, Waddadaas oo uu innaga Caawiyey Baanka Horumarinta Africa, waxaana la bilaabi doonaa marka ay dhammaato sahamintu Insha Alla.
§ Waxa la dhisay Waddo Laami ah oo isku xidha Magaalada iyo Madaarka Laascaanood.
§ Dhinaca Waxbarashada, waxa la dhisay 76 Dugsi oo cusub, waxa tababar u dhammaaday400 oo Macallin, waxaanu u socdaa wali 670 kale.
§ Dhinaca Caafimaadka, waxa la tallaalay 589 Kun oo Caruur ah.
§ Waxa xarumaha Caafimaadka ee Dawladda lagu daweeyey 1.5 Milyan oo Bukaanah, oo ka badan sannadkii hore 12%.
§ Waxa dalkeena ku soo kordhaya Xanuunnada Dhimirka, Macaanka, Dhiig-karka, Wadne-xanuunka, Kansarka, Kalyo-xanuunka oo hore innoogu yaraa. Taas oo ay keenayso is-beddelka ku yimi cimillada, qaab-nololeedka iyo dhaqan-dhaqaalaha bulshadeena.
§ Sannadkii tagay, marka la isku daro bukaanka Wasaaradda Caafimaadku xaqiijisay iyo cel-celiska bukaanka aan soo marin Wasaaradda Caafimaadka ee Dalalka Dibedda u tagay arrin Caafimaad, waxa ay gaadhayaan 5,600 ooqof, taas oo qofkiiba ugu yaraan cel-celis ahaan ay ku baxday, 10 Kunoo Doollar. Taas oo ka dhigan in sannadkii tagay ay bulshadeenu ku bixisay caafimaad Dibadeed in ka badan 56 Milyan oo Doollar.Lacagtaasi, haddii ay bulshadeenu iskaashato, waxa ay innoo dhisi kartaa Cisbitaallo Casri ah. Arrintaasi waxa ay dhiig bax ku tahay dhaqaalihii awalba yaraa ee dalkeena, waxayna u baahan tahay in Qaranka iyo Shacabka Somaliland-ba talo ka yeeshaan arrintaa.
§ Waxa la qoday 42 Ceel oo dhaadheer oo cusub, waxaana laga qoday 38 Degmo oo ku kala yaal Gobollada, waxaana la dayactiray 16 Ceel oo hore.
§ Waxa la qoday 81 Ceel oo gaa-gaaban, waxaana laga qoday Gobollada dalka.
§ Waxa la qoday 13 Dhaam oo waaweyn.
ü Amniga iyo Degenaanshaha Bulshada waxa ugu horreeya in Bulshadu wax wada yeelato, iskaashato, isna aaminto. Taana waxa tiir-dhexaad u ah hawlaha culus ee ay innoo hayaan Hay’adaha Garsoorka. Waxa hubaal ah in Waaxda Garsoorku tahayXabagta isku haysa Shacabka.Sidaa darteed, Waaxda Garsoorku waxay mudnaanta siisay:
ü Degenaanshaha Bulshada waxa lagu sugi karaa in loo sinnaado Fursadaha Shaqada, dhaqaalaha, fursadaha Waxbarashada iyo in la taageero bulshada qaybaha nuqul. Sidaa darteed, Xukuumaddu waxa ay abuurtay Barnaamijka Shaqo Qaran oo fursad siman siiya dhallinyarada Somaliland. Waxa kale oo aannu Hay’adda Shaqaalaha Dawladda ku adkaynay in ay fursadaha shaqo ee ka soo baxa Hay’adaha Dawladda si daah-furan oo xalaal ah loogu tartamo, si aan la isku tuhmin, wada jirka ummaddana wax loo yeelin.
ü Iyadda oo mudnaanta la siiyo in la caawiyo qaybaha nugul ee bulshada:
ü Maamul Wanaagga – Waxa aannu aaminsannahay in Maamul-wanaaggu ka mid yahay tiirarka waaweyn ee lagu beegsan karo Amni Bulsho iyo Horumar ummadeed, laguna heli karo maamul suuban oo laf-dhabar u noqda Dawladnimada.Waxa kale oo uu ka qayb-qaadan karaa kobcinta qaab-dhismeedka iyo hufnaanta shaqada Dawladdi u hayso Shacabkeeda.